Adindra: အနောက်အာဖရိကသင်္ကေတများ - ရိုးရာဉာဏ်ပညာကိုရည်ညွှန်းသော AFRIKHEPRI
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, Aprilပြီ 8, 2020
စာကြည့်တိုက် theosophy (PDF)
စာကြည့်တိုက် Kamite တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း (PDF)
မှော်အတတ်နဲ့ esotericism ၏စာကြည့်တိုက် (PDF)
ယင်း၏ aphrodisiac အရည်အသွေးတွေများအတွက်မသိ, ဂျင်းအစာခြေတိုးတက်ကောင်းမွန်
Soursop ကင်ဆာဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်မှဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုထက် ပို. ထိရောက်သောပါလိမ့်မယ်
ရုရှားလေ့လာမှုအရ GMOs များသည်မျိုးဆက် (၃) ခုနောက်ပိုင်းတွင်လူသားများကိုပိုးသတ်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်
Acai berry သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးသည်
အဲဂုတ္တုလူနက်နဲသောအရာ - ဇနျးဒါး Moret (PDF)
Chakra လမ်းညွှန် (PDF)
အဆိုပါအဝါရောင်စာအုပ်အမှတ် 1 (PDF)
စဉ်းစားပါနဲ့ချမ်းသာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း - နပိုလီယံဟေးလ် (PDF)
ကင်ဆာမရှိသောကမ္ဘာ၊ ဗီတာမင် B17 သမိုင်း (PDF)
အကြောင်းတရားများကိုးကွယ်ရာ - Bingen ၏ Hildegard (PDF)
အခုတော့ကို The Power of - Eckhart သေဆုံးသူ (PDF)
Theosophy ၏အခြေခံကျသောဥပဒေများ - Annie Besant (PDF)
အသက်ပန်း၏ရှေးဟောင်းလျှို့ဝှက်ချက် - အတွဲ ၁ (PDF)
အာဖရိက၏အထွေထွေသမိုင်း - အတွဲ ၆ (PDF)
(2003) ကနေမျက်ရည် Watch
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (2016) မေတ္တာရှင်
ကိုယ်တော်သည်ကြည့်ရှုလော့ရမည် (2016) မသတ်
သူတို့အဖေကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ပါ (2017)
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရုံ Wright (2011)
ဟာရီကိန်း (2000) အကဲခတ်
AFURAKA / AFURAITKAIT - အာဖရိကဟူသောဝေါဟာရ၏မူလအစ
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို Kilimanjaro ၏မူလအစ
အိန္ဒိယရှိ Dravidian ယဉ်ကျေးမှု
Tyana မှ Apollonius သည်“ မှန်သော” ခရစ်တော်ဖြစ်သလော။
ကျမ်းစာက Sumerian ကျမ်းတစ်ဦးမိတ္တူသို့မဟုတ်ဆက်လက်?
အဆိုပါ Lupercalia, သန့်ရှင်းသော Valendin ၏ဇစ်မြစ်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ် Kimuntu ကဘာလဲ?
မားကွတ်စ် Garvey - အာဖရိကလူမျိုးစုများစည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ဖခင်
အာဖရိက၏အထွေထွေသမိုင်း (အတွဲ ၁)
အဆိုပါ griot - Tour Aboubakar Cyprien
လူမည်းရဲ့ငိုကြွေးသံ - Alain mabanckou
နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်း - Claude Ribbe
သမ္မတကတော် B - မာယာအန်ဂျလို
အာဖရိကဘာသာတရား - Mbog Bassong (စာအုပ်)
နေသမျှကာလပတ်လုံးငါအနက်ရောင်ရယ်အဖြစ် - မာယာအန်ဂျလို
Quilombos ပြန် palmares
memory & သည်ဤ
တွေးခေါ်ရှင် Sage နှင့်အာဖရိက
ဒဿန & Psychology
ဒဿနိကဗေဒနှင့်စိတ်ပညာ | ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ
ချက်ချင်း / သတင်းများ
ဝိန်းဒိုင်ယာ (အသံ) - အားလုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာဝိညာဏဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်
Christiane Taubira သည်ကျွန်စနစ်၏ပထမဆုံးသောပြင်သစ်ပြည်ပဌာနများအတွက်လျော်ကြေးတောင်းခံသည်
Eckhart သေဆုံးသူ (အသံ) - မတ်ေတာသပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်
အဆိုပါ pineal ဂလင်း၏သတိမရှိသောလျှို့ဝှက်ချက်များ
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် - ဒဏ္ofာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ် - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၁)
ရည်ရွယ်ချက်၏စွမ်းအား - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
ကိုယ်တိုင်လက်ခံမှု - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
Zeitgeist: The Hidden Truth - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
Kwame Nkrumah - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၇)
တစ်ချိန်ကအာဖရိကနိုင်ငံများ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (2018)
သူငယ်ချင်းများအဖြစ်လာကြ (မှတ်တမ်း) (၂၀၁၅)
မနက်ဖြန် - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၅)
Mosquirix ငှက်ဖျားဆန့်ကျင်ကာစမ်းသပ်ကာကွယ်ဆေး (ငှက်ဖျားရောဂါ)
Ubongo ကလေးတွေ၊ အာဖရိကကိုရှာဖွေနေတဲ့တန်ဇန်းနီးယားကာတွန်း
Jing Lou: အာဖရိက-တရုတ်, တစ်ဦးက Tele ဆောငျးပါးမြားရာတွင်ပါဝင်နေနှင့်တရုတ်နိုင်ငံခေါင်းစီးသတင်း IN လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏မေးခွန်းကိုပြည့်
THE စကိတ်စီးခြင်း-ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ယာဉ်များလေဝိသားတို့သည်, TOMORROW'S သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Gabon တွင်နာမည်ကျော်ဂီတကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် African Music Institute (AMI) ဖွင့်လှစ်သည်
တိုက်ကြီးလုပ်သူ 25 အာဖရိကလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များ
မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုစွမ်းအား - Brian Tracy
ရရှိတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို - Eckhart အော်ဟစ် (အသံ)
သင့်ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်ထဲ၏တနျခိုး - ယောသပ်သည်မာဖီ (အသံ)
သူတို့လုပ်သမျှကိုသိသောသူတို့၏အလေ့အထ ၇ ခု - စတီဗင်ကော်ဗေး (အသံ)
Sumerian tablet အရလူသား၏မူလအစ - အပိုင်း ၂ (အသံ)
အဆိုပါဝိညာဉ် '' စာအုပ် - အယ်လန် Kardec (အသံ)
Sumerian tablet အရလူသား၏မူလအစ - အပိုင်း ၁ (အသံ)
Adindra: ရိုးရာပညာ၏အာဖရိကအနောက် evocative သင်္ကေတများ
တွင် BLACK တီထွင်သူနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များ, ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်ဘာသာရေး
သငျသညျအကြှနျုပျတို့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြ "Adindra: evocative အာဖရိကအနောက်ဘက်သင်္ကေတ ... " တစ်ဦးကစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာ
Lသူသည်အီဂျစ်၏အထိမ်းအမှတ်သင်္ကေတများကိုလူသိများသည်။ ယခုအခါအထူးခေါ်အနောက်အာဖရိကမှအာဖရိကသင်္ကေတများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အချိန်ဖြစ်သည် Adinkra . အဒင်ကရာသည်အမြင်အာရုံသင်္ကေတများဖြစ်သည်။ မူလကဂါနာ၏ Ashanti နှင့်အနောက်အာဖရိကရှိ Cote d'Ivoire မှ Gyaman တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အယူအဆများသို့မဟုတ်စကားလုံးဝေါဟာရများကိုကိုယ်စားပြုပြီးအထည်များ၊ မြေအိုးများ၊ တံဆိပ်များနှင့်ကြော်ငြာများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ သင်္ကေတများသည်အလှဆင်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိသည်၊ သို့သော်ရိုးရာဉာဏ်ပညာ၊ ဘဝ၏ရှုထောင့်များသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထုတ်လွှင့်သည့် evocative messages များကိုဖုံးအုပ်ထားသောအရာဝတ္ထုများကိုလည်းကိုယ်စားပြုသည်။ အောက်ကစုဆောင်းခြင်းအလုပ်ဖြစ်ပါသည် ဂျင်း Macdonald အနုပညာရှင်များနှင့်ဖန်တီးသူအာဖရိက-မှုတ်သွင်းလိုဂို, ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, အဝတ်အစား, လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအတွက်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဘို့အများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည် တက်တူး ။
1 ။ Sankofa
2 ။ NOS DA MU တစ်ဦးက wo
စကားလုံးဝေါဟာရမှ“ Wo NSA da mu un, nnya Wonni wo” -“ မင်းရဲ့လက်တွေပြားနေတယ်ဆိုရင်လူတွေကအရာအားလုံးကိုမစားဘဲသင့်ကိုဘာမှမစွန့်ပစ်ဘူး” အရင်းအမြစ်: “ ဥပစာအဖြစ်ထည်” gf Kojo Arthur
3 ။ Suban wo SESA
ဤသင်္ကေတသည်ထူးခြားသောအဒင်္ကရာသင်္ကေတနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်“ နံနက်ကြယ်” သည်တစ်နေ့တာ၏စတင်မှုအသစ်ကိုပြသနိုင်သည့်အလှည့်သို့မဟုတ်လွတ်လပ်သောလှုပ်ရှားမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
4 ။ Wawa ABA
ခက်။ Akan ယဉ်ကျေးမှုတွင်၎င်းသည်ခိုင်မာပြီးမာကျောသောသူတစ် ဦး ၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်းကိုအခက်အခဲများမှတစ်ဆင့်ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။
5 ။ TAMFO BEBRE
6 ။ WOFORO Dua AP
Woforo dua un pa, na yepia wo ဟူသောအသုံးအနှုန်းမှ "သင်သည်ကောင်းသောအပင်တစ်ပင်ကိုတက်သည့်အခါသင့်အားကူညီခြင်းပေးသည်" ကိုဆိုလိုသည်။
ပိုများသောတင်စားမှုများကို, သင်ကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းမရှိအတွက်အလုပ်လုပ်ရသောအခါ, သင်ထောက်ခံမှုရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
source: ဥပစာအဖြစ်ထည် gf Kojo အာသာတို့က
7 ။ PEMPAMSIE
အလိုတော်၏သင်္ကေတ, ခိုင်မာခြင်း, Hardy
အဆိုပါအညီ အဆိုပါ Adinkra အဘိဓါန် , ဒီဇိုင်း ဒီသင်္ကေတ၏ကွင်းဆက်၏ကွင်းဆက်များနှင့်တူပြီးခွန်အားနှင့်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားခြင်း၏အရေးပါမှုကိုဆိုလိုသည်။
8 ။ OWUO ATWEDEE
သေဆုံးမှု၏သင်္ကေတပေါ်ပင်တစ် ဦး သတိပေးချက် ဒီကမ္ဘာမှာဖြစ်တည်မှု၏သဘောသဘာဝနှင့်မှာကောင်းသောဘဝနေထိုင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည် နောင်တမလွန်ဘဝ၌ထိုက်တန်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရန်
9 ။ OWO FORO Adobe
ဆူးများကြောင့် raffia သစ်ပင်သည်မြွေအတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတက်နိုင်သောစွမ်းရည်သည်ဇွဲရှိခြင်းနှင့်သမ္မာသတိရှိခြင်း၏စံနမူနာဖြစ်သည်။
10 ။ OSRAM NE NSOROMMA
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, သစ္စာရှိမှု, သဟဇာတ၏သင်္ကေတ
ဤသင်္ကေတသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမစပ်ကြားရှိသဟဇာတဖြစ်မှုကိုထင်ဟပ်သည်။ နယပုံပြင် -“ ။ Kyekye pe running” (North Star သည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးသည်။ သူမသည်ခင်ပွန်း၏လပြန်လာချိန်ကိုစောင့်နေရင်းကောင်းကင်၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ) - မှ အဆိုပါ Adinkra အဘိဓါန် )
11 ။ ADOM NTI BIRIBIARA BEYE JEI ONYANKOPON
12 ။ OKODEE MMOWERE
လင်းယုန်သည်ကောင်းကင်၌အစွမ်းထက်ဆုံးငှက်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏အစွမ်းသည်၎င်း၏အပင်များ၌တည်ရှိသည်။ Akan မျိုးနွယ်စုကိုးခုအနက်မှ Oyoko မျိုးနွယ်စုများသည်ဤသင်္ကေတကို clan အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
13 ။ ODO NNYEW FIE Kwan
14 ။ Nyansapo
အထူးသဖြင့်လေးစားထိုက်သော Akan ၏သင်္ကေတဖြစ်သောဤသင်္ကေတသည်“ ပညာရှိသောသူသည်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကိုရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ပညာရှိခြင်းဟူသည်ကျယ်ပြန့်သောဗဟုသုတ၊ သင်ယူခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ဤစွမ်းရည်များကိုလက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးချနိုင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ "(Willis" အဆိုပါ Adinkra အဘိဓါန် ")
15 ။ NYAME Ye OHENE
source: ဥပစာအဖြစ်ထည် gf
16 ။ NTI NYAME
ဒဗလျူဘရုစ်ဝီလီစ်စ်၏အဒင်ကရာအဘိဓာန်အရ“ ဤလှံတံကိုယဉ်ကျေးမှုများစွာမှဘဝဝန်ထမ်းများအဖြစ်ပုံဖော်ထားသည်။ အစားအစာသည်ဘ ၀ ၏အခြေခံဖြစ်သည်၊ ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏အစားအစာအတွက်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ထားရှိသည့်အစာအတွက်မဟုတ်လျှင်ရှင်သန်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း Akan ကိုပြသည်။ "
17 ။ NYAME NNWU NA MAWU
“ ဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှမသေဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါမသေနိုင်ဘူး”
ဘုရားသခင့ omnipresence ၏အမှတ်အသားနှင့်လူသား၏စိတ်ဝိညာဉ်၏အစဉ်အမြဲတည်ရှိမှု
18 ။ Soros wo NYAME biribi
19 ။ NSOROMMA
“ ကောင်းကင်သား [ကြယ်များ]”
20 ။ NSAA
ထည် handwoven တစ်ခုမှာအမျိုးအစား
စစ်မှန်မှု NSAA မှဒဗလျူဘရုစ်ဝီလီစ်၏“ The Adinkra အဘိဓါန်” အရသိရသည်
သင်္ကေတသင်္ကေတများသည်“ nea onnim NSAA oto n'ago” ဟူသောစကားလုံးကိုထင်ဟပ်စေသည် “ စစ်မှန်တဲ့ Nsaa ကိုမသိတဲ့သူကအတုတွေ ၀ ယ်မယ်။ "Nsaa ၏အရည်အသွေး ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်၏အရည်အသွေးကိုယ်စားပြုရောက်လေပြီ။
21 ။ NKYINKYIM
22 ။ NKYIMU
ပုံနှိပ်ခြင်းမပြုမီ adinkra ထည်ပေါ်တွင်လုပ်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ကွဲပြားခြင်း
အထိမ်းအမှတ် ကျွမ်းကျင်မှု၊ တိကျမှု Adinkra ထည်ကိုသင်္ကေတများဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ လက်မှုပညာသည်များသည်ပတ္တူစကိုပိတ်ပြီးပိတ်ထားသောစတုဂံပုံဆွဲကွက်တွင်မျဉ်းကြောင်းများဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည် ကျယ်ပြန့်-သွားဖြီး။ ဤသည်ပြင်ဆင်မှုအတွက်တောင်းဆိုမှုများ technique ကို၏သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ် အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်အတွက်ရရှိလာတဲ့။
23 ။ NYAME Dua
“ ဘုရားသခင်၏သစ်ပင်” - ယဇ်ပလ္လင်
မျက်မှောက်နှငျ့ဘုရားသခငျ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏သင်္ကေတ။ အဆိုပါ Nyame Dua ထုံးတမ်းဖျော်ဖြေကြသည်ဘယ်မှာသန့်ရှင်းရာဌာနဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါများ၏ရှေ့မှောက်၌စိုက်ထူ
အိမ်သို့မဟုတ်ခြံဝင်းကိုဖြတ်ထားသောအပင်မှသုံး (သို့) သုံးလုံးဖြင့်ပြုလုပ်သည် များစွာသောအကိုင်းအခက်တွေ့ဆုံရန်။ ဒီပါ ၀ င်မှုကပြည့်စုံတဲ့ထရက်ကော့တ်အိတ်တစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ် ရေနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်သန့်စင်ခြင်းနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအတွက်အခြားသင်္ကေတပစ္စည်းများနှင့်အတူ
24 ။ NKONSONKONSON
“ Chain link”
25 ။ NEA OPE အရှေ့တောင်နာခံမှုရှိသော HENE
ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ခေါင်းဆောင်မှု၏သင်္ကေတအသုံးအနှုန်း“ Nea ope soi Obedi hene daakye pas, firi ase sue som ansa” ဆိုသည့်စကားရပ်သည်“ သူ။ အနာဂတ်မှာဘုရင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူကအရင်ဆုံးအမှုဆောင်ဖို့သင်ယူရမယ်။ "
source: ဥပစာအဖြစ်ထည် တန်းတူ
26 ။ NEA ONNIM NO SUA တစ်ဦးက, OHU
ဥပစာ gf Kojo အာသာတို့က
27 ။ MPUANNUM
“ အခွံငါးခု” (ဆံပင်)
ယဇ်ပုရောဟိတ်ရုံး၏သင်္ကေတ, သစ္စာရှိမှုနှင့် fingering“ ဒီသင်္ကေတကိုပျော်ရွှင်မှုရဲ့ဆံပင်ပုံစံလို့ပြောကြတယ်။ ဒါက
အစဉ်အလာကပရောဖက်ဆံပင်။ အဆိုပါ Adinkra သင်္ကေတဒီဇိုင်း
ဆံပင်ကပရောဖက်ချည်ထားခဲ့ပါတယ်ဘယ်လောက်ကြိုက်နှစ်သက် mpuannum ။ ဒါ့အပြင်သူက တာဝန်လုပ်နေသည့်အခါဆည်းကပ်ခြင်းနှင့်သစ္စာရှိမှုပိုစတာကိုကိုယ်စားပြုတယ် လိုအပ်သောတ။ ထို့အပြင် mpuannum သစ္စာရှိမှုသို့မဟုတ်မြင့်မားသော၏ဂျကိုဆိုလိုသည်
ဒဗလျူ Bruce Willis, အဆိုပါ Adinkra အဘိဓါန်
28 ။ MPATAPO
"ငြိမ်းချမ်းမှု / ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး node ကို"
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပစိဖိတ်ရေးရာ Mpatapo ကြောင်းချည်နှောင် node ကိုသို့မဟုတ် link ကိုကိုယ်စားပြုသည်
29 ။ MMUSUYIDEE
30 ။ MMERE Dane
အသက်သွေးကြော:တူသောထည် ဥပစာ gf Kojo အာသာတို့က
31 ။ MFRAMADAN
ဤသည်မှာသင်္ကေတလက်နက်ကိုင်များနှင့်ကောင်းစွာ built အိမ်တအိမ်ကိုညွှန်ပြပါ - built
လေထန်ခြင်းနှင့်သစ္စာပျက်သောအခြေအနေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒါဟာ Asante သမိုင်းတစ် ဦး အတွက်ထင်ဟပ် ရွှေမစင်၏ရေးထိုးမဟုတ်သောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အပိုဒ်။ ခံတွင်းဆက်စပ်အကောင့်များကဆိုသည် အကြောင်း, ဤအပိုဒ်ကိုထည့်နှင့်အညီ, ရွှံ့အိမ်များ Kumasi နှင့်အတူအားဖြည့်ရဦးမည် မြက်။ ဤသည်အားကောင်းပိုပြီးကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ဖြစ်အိမ်မှာဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် ဆိုးရွားသောရာသီဥတုအခြေအနေ။ "
De အဆိုပါ Adinkra အဘိဓါန် ဒဗလျူအားဖြင့်
32 ။ Wares wo ME
ကတိကဝတ်, ဇွဲ၏သင်္ကေတ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကွန်ကရစ်များရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်မည်သူမျှအလျင်စလိုမဖော်ပြခြင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အိမျတျော။ "
ဥပစာ gf Kojo အာသာ, စစဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ 89, 163 ။
33 ။ အိမ်ထောင်ဖက် MASIE
ဉာဏျပညာ, အသိပညာနှင့်သမ္မာသတိ၏သင်္ကေတအဆိုပါ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သော“ Masie mate” သည်“ ငါနားလည်” ဖြစ်သည်။ နားလည်
ပညာနှင့်အသိပညာကိုဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်လည်းယူသည်သမ္မာသတိကိုကိုယ်စားပြုတယ် အခြားသူကပြောသည်ကိုစဉ်းစားပါ။
34 ။ KWATAKYE Atiko
သင်္ကေတတစ်ခုအထူးသဖြင့်ဆံပင်စတိုင် Kwatakye, ဟောင်းစစ်ပွဲ၏တပ်မှူးဖြစ်ဟု ဆန်တီ။ အဆိုပါသင်္ကေတသတ္တိနှင့်မကြောက်တရားကိုကိုယ်စားပြုလာ၏။ ဒါဟာအစဖြစ်ပါတယ် Akan အသိုင်းအဝိုင်း၏သားကောင်းတစ် ဦး အားခေါင်းစဉ်အဖြစ်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။
- ဒဗလျူ Bruce Willis, အဆိုပါ Adinkra အဘိဓါန်
35 ။ KINTINKANTAN
36 ။ KETE PA ဆိုပြီး
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏မင်္ဂလာဆောင်သောသင်္ကေတ“ ကောင်းသောအိပ်ရာ” သည်သင်္ကေတဖြစ်သည် အကောင်းတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးကောင်းအိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ဆိုပါတယ်
ဥပစာ gf Kojo အာသာ, စစဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ 87-89
37 ။ Hye Won Hye
ဤသည်မှာသင်္ကေတပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့နိုငျခဲ့ကွသူမြားရိုးရာယဇ်ပုရောဟိတ်က၎င်း၏အသိကြာ သင်၏ခြေထောက်ကိုမလောင်ဘဲမီးကိုငြိမ်းစေပြီးအခြားသူများကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည် အခက်အခဲကျော်လွှား။
38 ။ HWE MU Dua
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက်သင်္ကေတဒီသင်္ကေတ ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဖြစ်စေ, အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအဘို့စစ်တိုက်ခြင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေး ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်လူ့ကြိုးပမ်း။
39 ။ GYE NYAME
“ ဘုရားသခင်မှလွဲ။ ”
ဒါကထူးခြားတဲ့ဘုရားသခင်၏အာဏာ၏သင်္ကေတများနှင့် လှပသောသင်္ကေတဂါနာအတွက်နေရာအနှံ့ပါပဲ။ ဒါဟာဝေးအသုံးပြုရန်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါသည်
အလှဆင်ထဲမှာ, ဂါနာလူမျိုး၏ဘာသာရေးအလွန်ကိုင်းရှိုင်းဇာတ်ကောင်အပေါ်တစ်ဦးရောင်ပြန်ဟပ်မှု လူထု
40 ။ FUNTUNFUNEFU-DENKYEMFUNEFU
“ Siamese မိကျောင်း”
ဒီမိုကရေစီနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုသင်္ကေတ မိကျောင်းတစ်ဦးအစာအိမ် share, ဒါပေမဲ့သူတို့အစားအစာကိုကျော်စစ်တိုက်ခြင်း။ ဒါဟာပေါ်ပြူလာသင်္ကေတ
ပြည်တွင်းရေးပstrိပက္ခနှင့်လူမျိုးစုခွဲခြားမှုသည်ယင်းတွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပေးသည်။
41 ။ FOFO
မနာလိုခြင်းနှင့်ငြူစူခြင်း၏သင်္ကေတ "လာသောအခါ fofo ၏ Petaling သူတို့ spiky အနက်ရောင်အဖြစ်မျိုးစပါးသို့လှည့်ကျလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Akan အဘိဓါန်ဝါးမြိုခြင်းသဘောသဘာဝ ဒီစက်ရုံကနေမနာလိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဆီသို့
ဒဗလျူ Bruce Willis အားဖြင့် Adinkra အဘိဓါန်။
ဤသင်္ကေတနှင့်ဆက်စပ်သော Akan စကားပုံတစ်ခုရှိသည် -“ fofo စက်ရုံဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း
42 ။ FIHANKRA
“ အိမ် / ခြံ”
ပုံမှန် Akan အဘိဓါန်၏သင်္ကေတလုံခြုံရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး (ဆန်တီ) စုပေါင်းအိမ်ရာပါဝင်သည်ဗိသုကာ, တစ် ဦး တည်းသာဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ရှိပါတယ်။
43 ။ FAWOHODIE
လွတ်လပ်မှု၊ လွတ်လပ်ခွင့်၊ လွတ်မြောက်ခြင်း၏လွတ်လပ်မှုသင်္ကေတ
"ဟူသောအသုံးအနှုနျးမှ Fawodhodie en obre na enam ။ ပကတိဘာသာပြန်ချက်:
De တစ်ဦးဥပစာအဖြစ်ထည် တန်းတူ
44 ။ ESE NE TEKREMA
45 ။ EPA သည်
Agbo,“ Adinkra Symbols ၏တန်ဖိုးများ” မှလက်ထိပ်ခတ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ပညတ္တိကျမ်း၏အလျှော့သဘောသဘာဝ။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ပြုမှုပုံစံအားလုံးကိုအားမပေးချေ။ ”
46 ။ EBAN
Akan ၏ချစ်ခြင်း၊ လုံခြုံမှုနှင့်အိမ်လုံခြုံရေးတို့၏သင်္ကေတသည် အထူးနေရာ။ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအတားအဆီးရှိသောအိမ်တစ်လုံးကိုစံပြအဖြစ်သတ်မှတ်သည် နေအိမ်သို့။ ထိုခြံစည်းရိုးသည်မိသားစုကိုသီးခြားခွဲထုတ်။ လုံခြုံစေသည် ပြင်ပမှာ။ တစ်ဦးခြံစည်းရိုးလုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကြောင့်, သင်္ကေတသည်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တွေ့ရသောလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။
မှ အဆိုပါ Adinkra
47 ။ DWENNIMMEN
“ Ram horn”
48 ။ DUAFE
အလှအပနှင့်သန့်ရှင်းမှု၏သင်္ကေတ, နှစ်လိုဖွယ်၏သင်္ကေတ ဣတ္အရည်အသွေးတွေကိုဒီသင်္ကေတ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအနည်းငယ်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်
ကွဲပြားခြားနားသော "The Adinkra အဘိဓါန်" နှင့် "Adinkra သင်္ကေတ၏တန်ဖိုးများ" ၌ကွဲပြားခြားနား; ယခင်femတ္ကြင်နာမှု, ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပိုပြီးပိုပြီးစိတ္တဇအရည်အသွေးတွေကိုအလေးပေးဖော်ပြသည် ဂရုစိုက်ပါ၊ ဒုတိယတစ်ခုမှာပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်သောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိပြီး၊ နှင့်ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းရေး။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ duafe သည် Akan ၏အဖိုးတန်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကသူမ၏ဆံပင်ဖြီးနဲ့ကျစ်လေ့ရှိတယ်။
49 ။ DENKYEM
လေကိုရှူရှူပါ၊ PDTPE ကိုပြသည်
50 ။ Lady Lady
“ Nဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းထဲကနေ om "
51 ။ ဘိုအာ ME NA ME MMOA wo
source: “ ဥပစာအဖြစ်ထည်” တန်းတူ
52 ။ BI NKA BI
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သဟဇာတသင်္ကေတဒီသင်္ကေတ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းနှင့်ပconflictိပက္ခဆန့်ကျင်သတိပေး။ ပုံသည်ငါးကိုက်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်
53 ။ BESE SAKA
ကြွယ်ဝမှု၊ ပါဝါ၊ ကြွယ်ဝမှု၊ ဖော်ရွေမှုနှင့်စည်းလုံးမှု Cola nut သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည် ဂါနာလူမျိုးဘဝ။ ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့တစ်ဦးကငွေသားသီးနှံ, ကအနီးကပ်စည်းစိမ်နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်
နှင့်များစွာသော။ ဤသင်္ကေတသည်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး၏အခန်းကဏ္representsကိုလည်းကိုယ်စားပြုသည် အတူတူကလူမြင်၏။
54 ။ AYA
ခံနိုင်ရည်နှင့်ကြံဖန်၏သင်္ကေတ။ ဖန်းပင်သည်မာကျောသောအပင်တစ်ပင်ဖြစ်သည် ခက်ခဲသောနေရာများတွင်ကြီးထွားနိုင်သောအပင်။ "ဒီသင်္ကေတကိုဝတ်ဆင်သူတစ် ဦး သူသည်အခက်အခဲများစွာကိုခံရပ်ခဲ့ပြီးအခက်အခဲများစွာကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ "
(Willis, အဆိုပါ Adinkra အဘိဓါန် )
55 ။ asas Ye DURU
Providence ၏သင်္ကေတများနှင့် Mother- ၏ဘုရားမြေကြီးတပြင်။ ဤသင်္ကေတသည်သက်ရှိများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကမ္ဘာမြေ၏အရေးပါမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
56 ။ ADINKRAHENE
ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုဤသင်္ကေတသည်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်သည်ဟုဆိုကြသည်
57 ။ AKOBEN
“ စစ်ပွဲ ဦး ချို”
သတိဝီရိယနှင့်ယုံကြည်မှုများ Akoben ၏သင်္ကေတတစ်ခုချိုကြီးဖြစ်ပါသည် တစ်ဦးသည်စစ်တိုက်အော်ဟစ်သောအသံကိုထုတ်ပေးလေ့ရှိတယ်။
58 ။ AKOFENA
ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ သတ္တိ၊ ဓားအများအပြားရှေးခေတ် Akan အဘိဓါန်၏လက်နက်၏အင်္ကျီတစ်လူကြိုက်များ motif ခဲ့ကြသည်ကူး စတိတ်။ သတ္တိနှင့်သတ္တိအသိအမှတ်ပြုအပြင်, ဓားကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ် ပြည်နယ်၏တရားဝင်အခွင့်အာဏာ။
59 ။ Akoko Nan
၏အမည်အပြည့်အစုံပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်စည်းကမ်း၏သင်္ကေတ ဒီသင်္ကေတအဆိုပါကြက်သူမ၏ငှာကွိမျအပေါ်သွားလာ "ကိုဘာသာ, ဒါပေမယ့်သတ်မထားဘူး
သူတို့ကို။ "ဒါဟာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ခြင်း, မိဘများ၏စံပြသဘောသဘာဝကိုကိုယ်စားပြုတယ် ဆုံးမခြင်း။ အမြိုးသားအစာကျွေးဖို့တိုကျတှနျးနှိုးဆျော, ဒါပေမယ့်စာကိုလုယူဖို့မသတိပေး
60 ။ AKOMA NTOSO
62 ။ ANANSE NTONTAN
ပညာ၏သင်္ကေတ, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးသောဘဝဖြစ်သည့် Anansi, ပင့်ကူသည်အာဖရိကတွင်လူသိများသောဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည် ပုံပြင်။
63 ။ AKOMA
Agbo အဆိုအရသည်းခံခြင်းနှင့်သည်းခံစိတ်၏သင်္ကေတ, အခါ, တစ်ဦး
လူတစ် ဦး အား“ သူတို့၏အစာအိမ်တွင်နှလုံးရှိသည်” ဟုဆိုသည်၊ သူသည်အလွန်သည်းခံတတ်သည်။
SOURCE မှ: http://www.siliconafrica.com/african-symbols-for-creative-design/
sapientograms သို့မဟုတ် Akan လူမျိုးတို့၏အတွေးအခေါ်ရေးသားမှု။ အတွဲ ၁
1 €ကနေ 19,00 အသစ်
1 € 9,09 ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
Aprilပြီလ 7, 2020 10:12 pm တွင်၏အဖြစ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များ
ဤဆောင်းပါးကိုအကြိမ် ၈၀ မျှဝေထားပြီးဖြစ်သည်။
21k Facebook သုံးစွဲသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
29 LinkedIn မှာယူသူကိုဆက်သွယ်ပါ။
2.7k Twitter သုံးစွဲသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ဒီ site ပေါ်တွင်သင်ရေးချင်ပါသလား။